Dzivisa Matambudziko neRollators - Vafambi Vemavhiri
Chinhu chakakosha kurangarira kuti riini kushandisa a rollator kuita kuti parege kuva neanokusundira iwe wakagara mukati mavo. Iyo rollator rubatsiro rwekufamba chete uye harufanire kushandiswa se kutakura mudziyo. Mazhinji mafirita akagadzirwa semubatsiri wekufamba chete uye kushandisa ivo nekuda kwezvimwe zvisina kutenderwa zvinangwa zvinogona kukanganisa munhu kushandisa ivo. A rollator inoshandiswa kuita kufamba kwakachengeteka uye nyore. Ivo kazhinji vanouya nechigaro kuitira kana iwe uchida kugara uye kuzorora kwechinguva. Rollators akagadzirirwa kushandiswa nemumwe munhu akagara mavari. Usaedze kusundidzira mumwe munhu mu rollator nekuti vazhinji vanofambisa havana simba kana simba rekutakura remhando iyi yekufamba. Welding yeiyo rollator inogona kupa kana huremu hwakawanda hwakaiswa pairi. Kana kusundidzirwa uchigara pasi chiri chinhu chauri kutsvaga, unogona kutsvaga rollator uye transport chair chemasanganiswa kukodzera zvaunoda chaizvo.
Rollators & Kufamba Aids
Vanachiremba Vanofamba Vanoshandiswa Kubatsira Vanhu Vane Matambudziko Ekufamba
Mhando dzeRolling Walkers